ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ငွေကြည်ကာတွန်းများ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ငွေကြည်ကာတွန်းများ
(Ngwe Kyi ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
SEA GAME မှာ မြန်မာအားကစားသမား ၈၀၀ လောက်
ပြိုင်ကြမယ် တဲ. ၊
... နိုင်ငံ ခြားကခေါ် ပြိုင်ခိုင်းမှာ ဘယ်နှစ်ယေါက်ပါမလဲမသိ ။။
.. စားပွဲတင် တင်းနစ်မှာဆို ... ရွေးထားတဲ. အမျိုးသား NO; 1 က မြန်မာပြည်မှာ 1 to 10 အဆင်. မရှိဘူး ၊ နေပြည်တော်မှာ camp သွင်းတာမို. ရန်ကုန်က player
တွေ သွားအရွေး မခံကြဘူး ၊ အမျိုးသမီး လက်ရွေးစင် မှာ
ဆွေဆွေဟန် ကလွဲလို. ကျန်တာတွေက သာမန် ပါ ၊နေပြည်တော် မှာကျင်.ထားတဲ. ပင်ပေါင်လက်ရွေးစင်
များကို ရန်ကုန် ၊ မော်လမြိုင် က player များ နဲ. လက်ရည်စမ်း စေသင်.ပါတယ် ၊
အားကစား အောင်နိုင်ရေး တင်ပြတာ ၊
ပုဂ္ဒိုလ် ရေးမပါ ပါ။ ကျန်အားကစားနည်း များလည်း
challenge for all ပြန် စစ်ဆေးသင်.ပါတယ် ။